တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ - ၂၇
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)ရွှေညောင်မြို့တွင်(၃၄)ကြိမ်မြောက်မြို့လုံးကျွတ် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲ ကို အောက်တိုဘာ (၂၇)ရက် နံနက်(၇)နာရီက ရွှေညောင်မြို့တွင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက် ရပ်ကွက်ပြည်သူများက ပဒေသာပင်ပေါင်း (၇၉)ပင်ဖြင့် တစ်ပျော်တစ်ပါးလှည့်လည်ကြပြီး၊ ရွှေညောင်မြို့ ဒဏ္ခိဏာရာမကျောင်းတိုက်သို့ ပို့ဆောင် ကြကြောင်းသိရသည်။
(၃၄)ကြိမ်မြောက်ရွှေညောင်မြို့၊ မြို့လုံးကျွတ်စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲတွင် တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ ရွှေညောင်၊ ဟဲဟိုး၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ သံဃာပေါင်း (၁၄၈)ပါး၊ ကျောင်းပေါင်း(၈၈)ကျောင်းတို့မှ ဆရာတော်သံဃာတော်များ တက်ရောက် ကြည်ညိုကြပြီး၊ ပဒေသာပင်ပေါင်း(၇၉)ပင် ပစ္စည်းတန်းဖိုး ငွေကျပ်သိန်း(၅၀)ခန့် ငွေတန်းဖိုးကျပ်သိန်း(၁၁၀) ကျော်ရရှိကြောင်းသိရပြီး၊ မြို့လုံးကျွတ်စုပေါင်းမဟာ ဘုံကထိန်းပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရေးဦးစီးကော်မတီမှ ငွေကျပ်သိန်း(၆၀)ခန့် အကုန်ကျခံ၍ ဆရာတော် သံဃာတော်များကို နေ့ဆွမ်း၊ ခဲဖွယ်များ၊ လှူဖွယ်ဝတ္တုပစ္စည်းများ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပြီး၊ လူဧည့် ပရိတ်သတ်အပေါင်း(၅၀၀၀)ကျော်ကို ထမင်း၊ ဟင်းလျားများဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးကြကာ၊ ရွှေညောင်မြို့၊ မြို့လုံးကျွတ် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းအကျဉ်းကို မြို့လုံးကျွတ်စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲ ဦးစီးကော်မတီနာယက ရွှေညောင်မြို့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်မှ ပြောကြားသွားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ(၃၄)ကြိမ်မြောက်ရွှေညောင်မြို့၊ မြို့လုံးကျွတ်စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန်ပွဲကို (၂၅.၁၀.၂၀၁၄) ရက်နေ့ ညနေ (၆)နာရီက မီးပဒေသာပင်ပေါင်း(၃၄)ပင်ကို ပြည်သူများက စုရပ်မှ မြို့တွင်းလမ်းနှင့် ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး တစ်လျှောက် တစ်ပျော်တစ်ပါးလှည့်လည်၍ မီးရှုးမီးပန်းများ လွှတ်တင်ပူဇော် ကြကြောင်းသိရှိရသည်။
ထို့နောက် မြို့လုံးကျွတ်မဟာဘုံကထိန်းရေစက်ချ တရားတော်နာယူကြရာ ပထမဦးစွာ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ ဧည့်ပရိတ်သတ်တို့က နမောတဿသုံးကြိမ် ဘုရားကန်တော့၍ ဖွင့်လှစ်ပြီး၊ ဒဏ္ခိဏာရာဆရာတော် ဦးသုန္ဒရထံမှ ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြ၍ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များမှ ရွတ်ဖတ် တရဇ္စျာယ်တော်မူသော ပရိတ်တရားတော်ကို နာယူကြကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ ဓနသိဒ္စိရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဝင်းရွှေမှ ဒဏ္ခိဏာရာဆရာတော်ကြီးထံသို့ ကထိန်လျာသင်္ကန်းကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြပြီး၊ ပင့်သံဃာတော်များအားလှူဖွယ် ဝတ္တုအစုစုတို့ကို ဆက်ကပ်လှူဒါန်း၍ ညမီးပဒေသာပင် လှည့်လည်ပူဇော်ကြသည့် ရပ်ကွက်အလိုက်ပြည်သူများကို စာချဆရာတော်ဦးပညာသာမိမှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပေးအပ် ကာ လှူဒါန်းမှုအစုစုအတွက် အနုမောဒနာတရားနာယူ၍ ရေစက်သွန်းချအမျှပေးဝေကြကြောင်းသိရသည်။
တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ ၂၄
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူ အောက်တိုဘာ(၂၄)ရက် မွန်းလွဲ(၁)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံရုံး သံအမတ်ကြီး (H.E. MR. Gautam Mukhopadhaya) နှင့် တွေ့ဆုံကြောင်း သိရသည်။
ပထမဦးစွာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်က သံအမတ်ကြီးအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံမှုတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံရုံး သံအမတ်ကြီး(H.E.MR. Gautam Mukhopadhaya) မှ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်/လားရှိုးမြို့များသို့ရောက်ရှိပြီး ကျိုင်းတုံ/တာချီလိတ်မြို့များကို ဆက်လက်သွားရောက်လိုကြောင်း၊ ယခု ကယားပြည်နယ်မှ တောင်ကြီးမြို့ကို ရောက်ရှိကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအနေအထား၊ တောတောင်ပတ်ဝန်းကျင် အလှပများကိုလည်းတွေ့ရှိရကြောင်း၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံများ ပြုလုပ်လို ကြောင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် (၂)နိုင်ငံ ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ ကားပြိုင်ပွဲကိုလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီး တောင်ကြီးမြို့ကိုဖြတ်ကာ တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံတို့တွင် ပြုလုပ် လိုကြောင်း၊ ကားပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ရခြင်းကြောင့် တောင်ကြီး၊ မူဆယ်ဒေသရှိ ပြည်သူများ စိတ်ဝင်စားပြီး၊ ကုန်သွယ်မှု စီးပွားရေး ကောင်းမွန်ရေး ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းများ၊ စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍများ စိတ်ဝင်စားကြောင်း၊ တာတာကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လ္ဘက်ခြောက်စက်ရုံ တည်ဆောက်ရန်အတွက် မြေနေရာများရှာဖွေလို့ မတွေ့ရှိသေးကြောင်း၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအနေ ဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ဆောင်ရွက်ပြီးမှ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် လုပ်ကိုင်လို ကြောင်း၊ အောက်တိုဘာလတွင် မန္တလေး၊ ရန်ကုန်မြို့များတွင် ကုန်စည်ပြပွဲများရှိပါကြောင်း၊ မူဆယ်၊ လားရှိုးတို့တွင် ကုန်စည်ပြပွဲများပြုလုပ်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးသွားကြောင်း သိရသည်။
ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်က မော်တော်ကား ပြိုင်ပွဲအတွက် ကလေး၊တမူးရှိလမ်းများကို ဘယ်လမ်းရွေးချယ်ထားကြောင်း၊ မော်တော်ကားပြိုင်ပွဲကို အထက်မှခွင့်ပြုချက်ရပါက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကူညီသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အနေဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူးခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာက ဆက်ဆံမှု ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိယဉ်ကျေးမှုကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အာဒံလူမျိုးများ မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ကြောင်း၊ လ္ဘက်ခြောက်စက်ရုံ တည်ဆောက်မည့်ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရာတွင် ပင်လောင်း၊ ပင်းတယ၊ နမ့်ဆန် ဒေသများတွင် ပို၍ကောင်းကြောင်း၊ လ္ဘက်ခြောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်မှု ရှိ/မရှိ နှင့် စက်ရုံတစ်မျိုးတည်းသာ တည်ဆောက်မှာလား သိရှိလိုကြောင်း၊ မော်တော်ကားအနေဖြင့် လှည့်လည်ပြိုင်ပွဲကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ တိုင်းရင်းသားများသည် ဗုဒ္ဓဂါယာကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှ တိုင်းရင်းသားများနှင့် နိုင်ငံခြားသားများသည် ဗုဒ္ဓဂါယာသွားရောက်ပါက အလေးအနက်ထားဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း ဆွေးနွေးသွားကြောင်း သိရသည်။